Ukuphupha ngeTherme Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
AmaRoma ayesele ekonwabela ukuhlamba kwindawo yokuhlambela eshushu kwaye asebenzise iipropathi zokuphilisa zamanzi kwizigulo ezahlukeneyo. Ibhafu kwiibhafu zokufudumeza zihlala zinemiphumo eliqela: uzive uhlaziyekile kwaye wachacha, uhlambe ukungcola kobomi bemihla ngemihla kwaye wenze into kwimpilo yakho.
Ukutolikwa kwephupha kulutolika njani uphawu lwephupha "iTherme"? Zithini iinguqulelo ezikhoyo? Kunika umdla ukujonga kumfanekiso wephupha «ichibi lokuqubha».
1 Uphawu lwephupha «iTherme» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «Therme» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «Therme» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «iTherme» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokubanzi kuthathelwa ingqalelo, uphawu lwe- "Therme" lokulala luhlala lutolikwa njengomqondiso wempilo entle yokulala kwi el mundo ukuvuka. Isimboli yephupha sisimemo kwenye inkqubo zokuhlanjululwa lwangaphakathi enye.
Ngokukodwa xa amanzi acocekileyo entwasahlobo eshushu abonakalayo ephupheni, iphupha elo kufuneka lime kancinci kwaye lijongane nemeko yeemvakalelo. Kwihlabathi elivukayo, kusekho izinto ezithile ekufuneka zicacisiwe. Oku kungabhekisa kwelona candelo lisondeleyo lephupha, kunye nobudlelwane bakho nabanye abantu. Ukutolikwa ngokuchanekileyo kutyhilwa ngohlalutyo lweemeko zokuhlala.
Ukuhlamba nokuqubha emanzini acocekileyo okuhlamba okushushu ephupheni kufuzisela ukutolikwa ngokubanzi kwephupha. Suerte y mpu melelo kwindlela yobomi eqhubekayo yokuphupha kwihlabathi elivukayo.
Ukuba umntu ophuphayo uhlamba kwindawo yokuhlambela eshushu kunye nabanye abantu, kufanele kucaciswe kuye ukuba kufuneka aphephe ukunxulumana nabantu ababi. Ngaphandle koko, iya kuba nefuthe elibi kwisidima sakho. Ukuba udada ephupheni nabanye abantu kwindawo yokuhlambela eshushu, uphawu lwephupha apha lubonisa ukuba ukwilizwe elivukayo elinokuthandana. Uncedo lwangaphandle iyimfuneko. Akufanele ube nekratshi kakhulu, kodwa wamkele uncedo lwabanye.
Uphawu lwephupha «Therme» - ukutolikwa kwengqondo
Kutoliko lwengqondo lwamaphupha, eyona nto kugxilwe kuyo emanzini ngokunxulumene nesimboli sephupha "ibhafu yokufudumeza." Kuba yalatha kuwe inkqubo yokuhlanjululwa kwengqondo, apho iphupha kufuneka liphule neemvakalelo ezindala zoxinzelelo.
Ngomqondiso wephupha "iTherme", umphuphi kufuneka aqonde ukuba ixesha elifanelekileyo lifikile lokujongana neminye imithwalo yakudala kwihlabathi lakhe leemvakalelo. Emva koko uya kuphila kwaye uya kuba nakho ukulawula ubomi bakho kwihlabathi elivukayo ngamandla ahlaziyiweyo.
Ukuba iphupha likhangeleka licocekile kwaye lihlaziyiwe emva kokuhlamba kwindawo yokuhlambela eshushu ephupheni, oku kuya kukubonisa ngokwasemphefumlweni ukuba sele ushiye ngasemva zonke izinto ezixinzelelweyo zamaxesha adlulileyo.
Ukuhlamba amanzi ashushu ephupheni iimvakalelo ezintle, oku kufanekisela okuhle Ukuzithemba kunye nobulumko obuthile bamaphupha kwihlabathi lokuvuka. Ukuba, ngokuchaseneyo, ukuqubha kwiindawo zokuhlambela ezishushu ephupheni akunakukonwaba xa uphupha, uziva ungazithembanga kwaye uxhalabile kwizinto ezininzi zehlabathi eliphaphamayo.
Uphawu lwephupha «Therme» - ukutolika kokomoya
Icala lokomoya lokuchazwa kwephupha libona kwisimboli yephupha «Therme» uphawu lwe fusion yendalo kunye nomnqweno.